Siyabonga, Squidoo! (UShoemoney qaphela) | Martech Zone
Siyabonga, Squidoo! (Shoemoney qaphela)
NgoMsombuluko, Februwari 26, 2007 NgoLwesine, ngo-Okthoba 29, 2015 Douglas Karr
Kule mpelasonto ngithuswe ukuphawula okusobala kwe-blog… i-URL okuyiwa kuyo empeleni ibiyi- Squidoo lens. Uma kukhona umuntu oyedwa kuleli zwekazi ongakwazi ukumelana noGaxekile, kungenzeka Seth Godin, Umbhali we Imvume Marketing futhi umsunguli weScidoo.
Qaphela abakwa-Spammers: IScidoo mhlawumbe akuyona indawo engcono yokusetha isitolo.
Noma kunjalo, ngivele ngaphosa i-Squidoo inothi elihle lokuthi ngibuyekeze ilensi okukhulunywa ngayo futhi ngezwa ukuthi kukhona ogaxekile ebhodini. Namuhla (kunguMsombuluko), ngithole inothi elinomusa elivela eqenjini laseScidoo ukuthi babheke amalensi amalungu futhi bekusobala ukuthi ukusethwa njengephambili lokumaketha kokusebenzisana okutholwe ngabakwa-Spam. Bakhubaze i-akhawunti. Ngikuqinisekisile ukuthi akusekho.
Ngesonto eledlule, kungenzeka ukuthi uzwile okukhulu "okumele ukwenze" mayelana nokuthi uShoemoney ukhishwe ku-MyBlogLog ngemuva wafaka ama-ID omsebenzisi amanye amalungu esizeni sakhe… Iphutha kumodeli yobumfihlo ye-MBL. UShoemoney ubuyiselwe esikhundleni sakhe ngemuva kwenothi elivela kwa-MBL kubhulogi labo mayelana nalesi sigameko kanye nokubuyela emuva.
Nakhu ukuthatha kwami. Anginanto engimelene noShoemoney futhi anginakho okuphikisana ne-MyBlogLog. I-MyBlogLog ibe yisibusiso kubhulogi yami nakwabanye ngokuvezwa okutholile kithi. Kodwa-ke bengingakusho lokhu… Ngiyakholelwa ngokweqiniso ukuthi ngenkathi uShoemoney ewa, bekungenxa yokuthi MBL ubekhathazekile ngobumfihlo bamanye ama-blogger njengoba uShoemoney eqale wafaka ama-ID ama-3 wengeza amanye futhi.
Angikukholwa lokho MBL ngibe nokukhetha… wayezohamba ibanga elingakanani uShoemoney? Ngabe wayezobeka ikhulu lapho? Inkulungwane? Ngabe wayebhale uhlobo oluthile lombhalo wokujova we-SQL lapho ayelanda khona i-database yama-ID? MBL impela bengazi ngakho bamsika… ngokushesha. Lokho kwakukuhle kithi sonke.
Kwakungekhona mayelana nokujezisa uShoemoney, kodwa kwakungokokuvikela thina. Akuyona into enhle leyo? Akukhona yini lokho esikufunayo? Kungakapheli ihora elilodwa, umthengisi uqalise ukuzivikela okungenzeka ukuthi kuphazamise ukuhlaselwa kwezokuphepha.
… Emuva ku-Squidoo, eShoemoney - sicela uqaphele:
Ngibike inkinga enkampanini ngabanika isikhathi sokuphendula basabela. Ngithole i-imeyili yokuqinisekisa engibongile ngokubazisa, baphenya udaba, futhi bathembisa ukuluxazulula ngesikhathi esifanele. Lapho ngifika ekhaya namuhla, ngibheke ukuthi umsebenzisi namalensi abo ahambile.
Unalokho engqondweni, lapho uthola imbobo yezokuphepha noma ukhipha umkhiqizo, kufanele unikeze abanye osebenzisana nabo ukuthi babike imininingwane ngesikhathi esifanele futhi ubanike isikhathi sokuphendula. Ukubheka emuva kungama-20/20, kepha bengizomhlonipha uShoemoney kakhulu ukube bengifunde ku I-Marketing Pilgrim ibhulogi uShoemoney ayesebenze neMyBlogLog ukuvimba umgodi wokuphepha ngobusuku bangayizolo.
UShoemoney wayengabika ngentuthuko, njengoba kungenzeka MBL futhi bebengasho bobabili ukuthi kusukela ngesikhathi sokubika kuze kube yisikhathi sokulungiswa kwakungaphansi kwehora elilodwa. Uma bengaphenduli, ngakho-ke gcoba ngokuphelele! Kepha ungathumeli i-loophole, uwagcobe, bese ulinda ukubona ukuthi kwenzekani. Lokho kubi kuwo wonke umuntu.
Ngokubika lolu daba nokulinda impendulo, bekungadala ukuphazamiseka okuningi, kugweme ukuduba, kugweme ukuphawula kwe-gazillion kumabhulogi amaningi, futhi bekungasindisa labo basebenzisi ekukhonjisweni kwe-ID yabo ... ukunqoba wonke umuntu. Ngangizobonga uShoemoney nami ngabe ngiyabonga MBL. Bekuzokhombisa ukuthi bobabili bebebheke mina nawe.
Hawu yebo ... ngiyabonga, Gil (kusuka Squidoo). Siyabonga, Seth! Ngiyabonga ngokuthi uthathe isikhathi sakho ukulungisa lolu daba futhi usibheke sonke.
PS: Angibhekile ukuthi kuqale impi yelangabi. Ngiyamhlonipha uShoemoney - ungamandla amakhulu we-blogger ngokulandela okumangalisayo. Unekhono futhi uphumelele kakhulu. Ngiyethemba ukuthi ngizoba nengxenye yokuvezwa ukuthi ubenosuku olulodwa. Ngifuna ukubeka umbono wami laphaya futhi ngithemba ukuthi uzophinde ayicabange leyo ndlela lapho kwenzeka into efana nale ngokuzayo. Akungabazeki ukuthi uzothola ezinye izingqinamba nezinye izicelo… Ngibheke phambili kuye ukusiza ekusivikeleni sonke!
Tags: mybloglogimali yezicathuloi-squidoo
Izici eziphezulu ezi-3 ezingekho ku-Google Blog Search?
I dont ngokuvamile iqhaza flamewars… isikhathi esiningi echibini hhayi inzuzo kakhulu kulokho =)
Ukulahleka kwakho umlando omningi nezinto ezenzeka ekusithekeni kepha into ye-mybloglog ibinjalo ngesonto eledlule
Siyabonga ngokuvakasha! Ngiyakwazisa kakhulu futhi uqinisile impela - ngingumuntu wesithathu kulokhu ngakho umbono wami ungahle ungabi namandla.
Ngiyalithokozela iqiniso lokuthi awubambiqhaza ezimpini zomlilo, ngiyabahlonipha ababhulogi abavikela ukungqubuzana (futhi lokho akulona iqiniso lalokhu).
Ngimane ngilangazelele ukuxhumana okungcono phakathi kwemikhiqizo nabantu, ukusebenzisa ama-blogs namapulpiti abahlukumezayo ngendlela efanele, nokunikeza abantu inzuzo yokungabaza ukuthi benze okulungile.
Ubambe kahle i-MBL isikhashana lapho. Ngiyethemba izinto sezizolunga.
Ngiyabonga futhi ngokuvakashela! Ngiyethemba uzobuya.
Lowo mfana angahlukaniswa njengephutha eliwubuwula elikhulu kunawo wonke. Lezo zinto ezincane esingacabangi ngazo kwesinye isikhathi ziyabuya zizosihlupha. Akusekho okunye ukuphawula ngenxa yobuwula obuhilelekile… ..
Iphuzu elihle olilethe lapho!